Mogadishu Journal » 2019 » September » 15
The al-Shabab militant group launched a series of attacks since Saturday that led to the death of at least 17 people in Somalia. Lower Shabelle region officials told VOA Somali that the militants attacked the town of Qoryoley late Saturday using rocket propelled grenades and...
Mas’uuliyiin ka tirsan Shabeellaha Hoose oo Qarax lala eegtay
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Qarax Khasaare geystay lala eegtay Mas’uliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo marayay Agagaarka degaanka Shalanbood. Kolonyada Qaraxa lala eegtay waxaa la socday Gudoomiyaha...
Kabtankii hore ee kooxda ciyaarta rugby-da ee Wales, Gareth Thomas ayaa shaaciyey in uu qabo fayraska HIV, asagoo sheegay in uu jabinayo “Takoorka arrintaas” ku xeeran. Wuxuu sheegay in uu doonayo in uu dadka tuso in dadka qaba HIV-ga si khaldan loo fahmay sida in ay yihiin “dad...
Mjournal :-Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magaalada Garoowe si rasmi ah uga furay shirka Maalgashiga Puntland oo lagu soo bandhigi doono fursadaha Maal-geshi ee ka jira Puntland. Shirkan oo socon doono muddo saddex maalmood ah ayaa...
Mjournal :-Sidda ay Warbaahinta u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo dab ayaa maanta ka kacay Gudaha Diyaarad dad Shacab ah ka qaaday Magaalada Muqdisho, islamarkaana gaartay Nairobi. Goobgoogayaal ayaa Risaala u xaqiijiyay in diyaaradda oo saarnaayeen rakaab Soomaali ah...
Mjournal :-Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo AMISOM ah lagu weeraray deegaanka Garas-Deelle oo qiyaastii 3km dhinaca Koofur ka xiga degmada Balcad. Weerarkan oo isugu jirey mid miino ah iyo weerar toos...
Wafdi hor dhac u madaxweyne Farmaajo oo gaaray Dhuusa-Mareeb
Mjournal :-Waxaa maanta magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug gaaray diyaarado ay la socdeen wafdi horu dhac u ah safarka Madaxweynaha Soomaaliya la filayo in uu ku tago magaalada Dhuusomareeb. Diyaaradaha gaaray magaalada Dhuusomareeb waxaa la socday ciidamo...
Qasri caan ah oo laga xaday Fadhi Suuli oo ka sameesnaa Dahab
Mjournal ;-Koox burcad ah oon wali heebtooda la garan ayaa xaday fadhi Suuli oo ka sameesnaa Dahab qaali ah oo yaalay Qasriga caanka ah ee Blenheim ee kuyaala dalka Ingiriiska . Booliiska Ingiriiska ayaa sheegay in kooxda burcada ah ee gashay qasriga ay ka xadeen fadhiga Suuliga...
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda Dhuusa-Mareeb
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maalinta berri ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, halkaasoo uu ka socdo shirweynaha dib u heshiisiinta. Sida wararku sheegayaan Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa...
Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo Shirka oo la soo xirayo
Mjournal :-Waxaa lagu wadaa in la soo geba-gabeeyo Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Maamulka Galmudug,kaas oo 5-tii Bishaan uu Magalada Dhuusamareeb ka furay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Shirka ayaa waxaa loogu talo galay inay ka qeyb-galaan...
Shirka Maalgashiga Puntland oo Maanta furmaya
Mjournal :-Maglada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal ayaa lagu wadaa in Maanta oo Axad ah uu ka furmo Shirka maalgashiga dowlad goboleedka Puntland,kaas oo socon doono mudo Saddex Maalmood ah. Shirka ayaa waxaa ka qeyb-galaya Madaxda Shirkado Caalami ah & ganacsato ka...